Ukuntuleka Kokuphendula Komphakathi Kulimaza Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Ukuntuleka Kokuphendula Komphakathi Kulimaza Ibhizinisi Lakho
NgoMsombuluko, Agasti 3, 2015 NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 Douglas Karr
Sesivele silinganisile umthelela webhizinisi we- ukungahlinzeki kahle kwamakhasimende maqondana nezokuxhumana. Kuthiwani ngokumane uphendule? Ubuwazi ukuthi imilayezo yomphakathi engu-7 kwengu-8 ebhekiswe kumikhiqizo ayiphendulwa kungakapheli amahora angama-72? Okuhlanganisa ukuthi ngeqiniso kube nokwanda okungama-21% kwemilayezo eya kuzimpawu zomhlaba jikelele (i-18% e-United States) futhi sinenkinga yangempela ezandleni zethu.
Kamuva kakhulu Ihlumela Inkomba Yezenhlalo, babale ukuthi amaphesenti angama-40 emiyalezo adinga impendulo. Futhi akumangazi ukuthi amaphesenti angama-40 amakhasimende ashiya uphawu ngenxa yensizakalo yamakhasimende empofu. Futhi ohlangothini olubuyela emuva, imikhiqizo esebenzisana namakhasimende ngemidiya yezenhlalo ithola isilinganiso samaphoyinti angama-33 ngaphezulu kwabo I-Net Promoter Score.
I-Sprout Social Index ngumbiko ohlanganiswe futhi wakhishwa yi-Sprout Social. Yonke imininingwane ebaluliwe isuselwa kumaphrofayili omphakathi womphakathi angama-97K (52K Facebook, 45K Twitter) ama-akhawunti asebenza njalo phakathi kweQ2 2014 neQ2 2015. Imiyalezo engaphezu kwezigidi ezingama-200 ethunyelwe ngaleso sikhathi yahlaziywa ngenhloso yalo mbiko. Eminye imininingwane isuka ku-Q1 2013 yaya ku-Q4 2013 kungenzeka ukuthi isuke embikweni wokugcina we-Sprout Social Index ngenxa yokushintsha kumaphrofayili omphakathi ahlaziyiweyo; kodwa-ke, konke ukuthambekela okuphezulu kuhlala kungaguquguquki.
Iseluleko sikaSprout Social kulolu daba senzelwe ukuthi imikhiqizo ihlanganise eyabo ukuphathwa kwezokuxhumana nabantu nge ipulatifomu yesevisi yamakhasimende ukuze amaqembu akho abele imisebenzi ngokufanele futhi nabantu abafanele bakwazi ukuphendula. lokhu kuqinisekisa ukuthi izibuyekezo zezokuxhumana eziqondiswe kumikhiqizo ziqala isicelo senkonzo yamakhasimende esinikezwe ummeleli othile wesevisi yamakhasimende.
Iseluleko sami esingeziwe kungaba ukuqinisekisa ukuthi noma ngubani ophendula ngezenhlalo unikezwa igunya lokuqinisekisa ukuthi izindaba zixazululwa ngokushesha nangempumelelo. Awukwazi ukubeka engozini ukubambezeleka ekuphenduleni esithangamini somphakathi esinohlelo oludinga ukuthi amathikithi abelwe kabusha futhi adluliselwe ukulungisa.
Tags: impendulo yamakhasimendeukunakekelwa kwamakhasimende emphakathiniinsizakalo yamakhasimende omphakathiimpendulo yezokuxhumanaisikhathi sokuphendula kwezokuxhumanaihlumela komphakathi